Username ပြောင်းချင်လို့ပါ။ — MYSTERY ZILLION
January 2008 edited January 2008 in Idea
User name ပြောင်းချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့... ကျွန်တော်ပြောင်းပေးပါ့မယ်... mail ပို့လိုက်ပါ ခင်ဗျာ..
saturngod AT gmail.com ကိုပါ..
[FONT=&quot]User name ပြောင်းချင်လို့ပါ။ ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။[/FONT]
[FONT=&quot]ကျွန်တော်က WindowsXP ကို သုံးပါတယ်.. သူမှာ [/FONT][FONT=&quot]User name ဘယ်လိုပြောင်းရမှာလဲ။ ဘာတွေသိထားသင့်ပါသလဲ၊ User name၊Password, Member တွေကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမယ်ဆိုတာကို နည်းနည်းလောက် ဆွေးနွေးပါရစေГўв‚¬В¦[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]Start Гўв‚¬вЂњ settings- control panel- User accounts- (Run ထဲကို nusrmgr.cpl (သို့မဟုတ်)control userpasswords ရိုက်ထည့်ပြီး OK လုပ်) ထဲကနေ လက်ရှိသုံးနေတဲ့ account ကို click နှိပ်လိုက်ပါГўв‚¬В¦What do you want to change about your account? ပေါ်လာပြီး Change my name ကနေ user name ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်..(သို့သော် ကိုယ့်ရဲ့ accounts က limited ဖြစ်နေရင် ပြောင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး၊ ဒီအခါမှာ Administrator account ကနေ၀င်ပြီး user name ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်Гўв‚¬В¦ control panelထဲကနေ၀င်ရောက်ပြီး user accountကို Administrator, limited account စသည်ဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်သော်လည်း IT Pro သမားတွေမသုံးကြပါ။[/FONT]
[FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot]My Computer ကို double click လုပ်ပါГўв‚¬В¦ Manage ထဲကို၀င်ပြီး local Users and Groups [/FONT][FONT=&quot](Run ထဲကို [/FONT][FONT=&quot]lusrmgr.msc[/FONT][FONT=&quot] ရိုက်ထည့်ပြီး OK လုပ်)[/FONT][FONT=&quot] ထဲက Users - ထဲကို၀င်ပြီး လက်ရှိသုံးနေတဲ့ user ကို double click လုပ် Rename ကို select လုပ်ကာ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်Гўв‚¬В¦ ဒီနည်းလမ်းက ကျယ်ပြန့်လူကြိုက်များပါတယ်Гўв‚¬В¦ အဲဒီထဲမှာ[/FONT][FONT=&quot] User ကို Member နဲ့ပတ်သက်ပြီး[/FONT][FONT=&quot] လုပ်ဆောင်နိုင်တာတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်Гўв‚¬В¦[/FONT]
[FONT=&quot] Office programs တွေက user မတူတဲ့အခါမှာ file ကို Read only သာပေးတက်ပါ တယ်Гўв‚¬В¦. SID မတူလို့ပါ၊ permission(NTFS) ကိုအသုံးမပြုရင် အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်Гўв‚¬В¦ user name ပြောင်းလိုက်တဲ့ account ကို Administrator Membership ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ..[/FONT]
အဆင်မပြေခဲ့ရင် ပြန်လည်မေးနိုင်ပါတယ်Гўв‚¬В¦ရိုးသားစွာဖြင့် ချစ်စွာသော [email protected][/FONT]
:1:hello i have gotanew tip.
that is to speed up dial up connection
first type in run ( telephon.cpl) and > choose modems>propertise>Advanced >and u will see the *Extra initialization commands* at that box.please type (AT&FX)
and disconnect the dial up and connect again ,,that time your dial up speed will bea115.2.that is really work,,,i hope u wll be share to all of your fri,
if u have problem please send me my email,,,[email protected]:67: